PressReader - Isolezwe: 2018-02-15 - ‘Abantu mabafunde ukukhuluma ngezandla’
‘Abantu mabafunde ukukhuluma ngezandla’
Isolezwe - 2018-02-15 - IZINDABA - ZANELE MTHETHWA
AKUBONA abangezwa kuphela okumele bafunde ukukhuluma ngezandla kodwa lokhu sekumele kufundwe abantu bonke. Lokhu kushiwo nguMnuz Tsakane Chauke woMnyango wezoBuciko namaSiko eGauteng, obechaza ngezinhlelo abaziqalile zokufundisa abantu ukukhuluma ngezandla. UChauke ubekhuluma engqungqutheleni iLibraries, Language, Archives and Museums (LLAM) ephela namuhla, eThekwini.
Uthe iSign Language akumele kube sengathi eyabangezwa nabangakwazi ukukhuluma kodwa kumele ihlonishwe.
“Uma umuntu ekhuluma isiZulu uphatheka kabi uma kukhona amagama ongawabizi kahle ngoba uyaluhlonipha ulimi lwakhe. Kungani ingahlonishwa iSign Language ngoba labo abayisebenzisayo nabo bafuna amagama abizwe ngendlela efanele,” kusho uChauke.
Uveze ukuthi ngonyaka odlule baqale uhlelo olubizwa ngeFinger Spelling Bee lapho begqugquzela ukusetshenziswa kweSign Language. Lolu hlelo baluqale ezikoleni kodwa bayabafundisa nabadala abafuna ukufunda lolu limi. Kulolu hlelo kukhona nomncintiswano wokutolika ngezandla okuthiwa ungenelwe yizingane ezingaphezu kuka-200 eGauteng. Kulezi zingane kukhona nezikwaziyo ukukhuluma ngoba kuhloswe ukuthi iSign Language ihlonishwe yiwo wonke umuntu. “Lolu hlelo ngolokuqala e-Afrika futhi sesithole amazwe amaningi eluncoma efuna ukwazi kabanzi ngalo. Luyingxenye yokukhuthaza isiko lokufunda nokuqwashisa ngokusetshenziswa kweSign Language ukuze nomphakathi uyihloniphe,” kusho uChauke.
Evula le ngqungquthela ngoLwesibili uNgqongqoshe wezoBuciko namaSiko KwaZuluNatal, uNkk Bongi Sithole-Moloi, naye ukukhuthazile ukufundwa kwazo zonke izilimi. Uthe izikhulu zikahulumeni seziyafundiswa neSign Language. Phakathi kwezikhulumi ebezishiyelana inkundla izolo kubalwa uNkk Dudu Busani-Dube wodumo lwencwadi ethi Hlomu The Wife. Utshele izethameli zengqungquthela ukuthi kube nzima esaqala ukubhala njengoba ezenzele konke ngaphandle kokuba nenkampani yabashicileli. Uthe okwenza izincwadi zakhe zidume ukuthi zithinta impilo yabantu ngoba naye ubhala ngezinto abezibona emphakathini.
“Kubalulekile ukuthi umongo wencwadi ukhulume nabantu ukuze baheheke. Kubalulekile nokuthi ubahloniphe abantu abathenga umsebenzi wakho ngokuthi ubanikeze okuyikhethelo ngisho indlela incwadi eyenziwe ngayo,” kusho yena.
Umbhali wezincwadi zezingane, uNksz Dharmisha Cvetkovic uthe kumele kusetshenziswe imidwebo ehehayo ezincwadini zezingane ukukhuthaza ukufunda.
INGXENYE yezithameli zengqungquthela iLibraries, Languages, Archives and Museums eseThekwini, izolo kukhuthazwe ukuthi abantu bafunde neSign Language